भारतबाट ‘केटी’ बनेर फर्किंएका सुरेन्द्र मिडियामाः कसरी बने केटी डरलाग्दो खुलास (हेर्नुहोस भिडियो)
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका– १ दोमिल्लाका १७ वर्षे सुरेन्द्र माल २०७१ सालमा १२ कक्षा पढेर बुवासँगै भारत गए । भारतमा कम्प्युटर सिकेर उज्ज्वल भविष्य बनाउने उनको सपना थियो । जिन्दगीमा सधैं सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ ? ५ वर्षपछि घर फर्किंदा उनी ‘केटी’ प्रियंका बनेकी छन् । गाउँले अचम्ममा परेका छन् भने प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
भारतमा सवारी चालकको काम गर्ने बुवा जयराज मालले उनलाई उत्तराखण्डको हरिद्वारमा कम्प्युटर सिकाउन इन्स्टिच्यूटमा भर्ना गर्दिनुका साथै सानोतिनो जागिर समेत दिलाएका थिए । बुवा जयराज देहरादून चल्ने गाडी चलाउने भएकाले सधैं सुरेन्द्रसँगै हुँदैन्थे । ‘को–को आएर बढी तलब दिन्छु भनेर छोरा सुरेन्द्रलाई लगेर गएछन्,’ बुवा जयराजले भने, ‘भारतको जम्मुकस्मिर पुर्‍याएछन्, तेस्रोलिङ्गीहरूको समूहले त्यहाँ पुर्‍याएर बन्दी बनाएको थाहा पाएपछि २०७२ सालमा चिनेजानेका एक जनाले घर फिर्ता ल्याएका थिए ।’
घर पुगेका सुरेन्द्र पछि फेरि भारत गएको र आफू भारतमै चालकको काम गर्ने भएकाले थाहा नपाएको बुवा जयराजले बताए । दोस्रोपल्ट भारत गएका सुरेन्द्र घरपरिवारको नियमित सम्पर्कमा थिएनन् । एक्कासि यही असार महिनामा सुरेन्द्र केटीजस्तै देखिने ‘प्रियंका’ भएर कृष्णपुरको दोमिल्लास्थित घर फर्किए । सँगै आए भारतीय मुस्लिम नागरिक, नइम ।बुवा जयराजका अनुसार सुरेन्द्र अहिले २२ वर्षका भए, तर उनी सुरेन्द्र होइन, प्रियंका बनेका छन् ।
औषधि र सुइका कारण ‘हर्माेन’मा परिवर्तन गर्न सकिने महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठ समेत बताउँछन् । ‘स्वेच्छिक लिङ्ग परिवर्तन गरिएका थुप्रै घटना सुनिन्छन्,’ उनले भने । प्रियंकाको हकमा जबरजस्ती भएकाले मुद्दा प्रक्रियामा गएको छ । लिङ्ग परिवर्तन गर्नका लागि सुरेन्द्रको यौनाङ्ग काटेर फालिएको तथा अन्य शरीरलाई औषधिबाट परिवर्तन गरिएको बुवा जयराजले बताए । ‘हामी न्याय खोजिरहेका छौं, प्रहरीले के गर्छ हेरौं,’ उनले भने । प्रियंकाको आवाज भने परिवर्तन भएको छैन । केटाजस्तै आवाजमा बोल्छिन् प्रियंका ।
कम्प्यु बुवा जयराज भन्छन्, ‘केटालाई केटी बनाएर विभिन्न रेस्टुरेन्ट बारमा नाच्न लगाउने रहेछन्, लामो समय नियन्त्रणमा राखेर नचाउँदै पैसा कमाउने धन्दा हुने रहेछ ।’ नयाँ घटना भएकाले अभियुक्तलाई कुन मुद्दा चलाउने, स्वास्थ्यको प्राविधिक विषयलाई कसरी समाधान र जाँच गर्ने भनेर प्रहरी समेत अलमलमा रहेको स्रोतले बतायो । भारतीय नागरिक नइमले प्रियंकालाई लिङ्ग परिवर्तन गराउनेको पञ्जाबाट मुक्त गरेर ल्याएको बताइएको छ । धेरै कुरा रहस्यमै छन्, प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।